Kulindwe uMnyango ngozovala isikhala sikaSomlomo – Ubukhosi
Home/ Umkhandlu/Kulindwe uMnyango ngozovala isikhala sikaSomlomo
UMnu uMfundo Wisdom Mthenjana
USAKHUNGATHEKILE umndeni wobenguSomlomo kuMasipala uMhlathuze uMnu uMfundo Wisdom Mthenjana ogule isikhashana washona.
Umndeni kaMthenjana uthi indlela ahambe ngayo isigubhukane engazange abike ukuxineka okutheni ishayisa amakhala.
Ngokusho kukamfowabo, uMnu uPhiwa Mthenjana, umndeni usalindele imiphumela yodokotela yokuhlolwa kwesidumbu ukuthola ukuthi ngabe ubephethwe yini uSomlomo eholele ekutheni aze adlule emhlabeni.
UMthenjana uqale kulesi sikhundla ngonyaka wezi-2015, wabuyela nangemuva kokhetho loHulumeni Bezindawo ngowezi-2016 .
Phambilini ubeyikhansela eSikhaleni lapho azalelwa khona. Ube yikhansela kuwadi 22 kusukela ngowezi-2011 kuya kowezi 2016.
UMthenjana uchaze umfowabo njengomuntu obebathanda abantu futhi ethanda ukubona intuthuko iya kubantu.
Uthe ubengeyena umuntu obejwayele ukuhlala ngokugula.
“Kusebuhlungu namanje akakukamukeleki ukuthi umfowethu akasekho emhlabeni. Ubengumuntu obezithobile ebathanda abantu, enenhlonipho futhi ezithobile. Okwamanje asikazi ukuthi ngabe ubephethwe sifo sini, sisalindele imiphumela yodokotela ezosho ukuthi ubephethwe yini njengoba bekungayena umuntu ogulayo. Sizwelana kakhulu nomndeni wasekhweni lakhe nomndeni wakithi wonke njengoba ubesezoshadelwa ngenyanga ezayo. Ushiye izingane zakhe ezimbili,” kusho uMthenjana.
Okhulumela uMasipala uMhlathuze, uMnu uMdu Ncalane esitatimendeni uthe: “Ukudlula emhlabeni kukaSomlomo uMthenjana kushiye igebe elikhulu emkhandlwini ngenxa yamagalelo akhe abenawo ikakhulukazi lawo okuxhumana nemiphakathi, Ubukhosi bendawo okuyizinduna, Amakhosi nabo bonke abahlukene. Ubenesiphiwo sokuletha ubumbano kuwo wonke amaqembu ezepolitiki kulo Mkhandlu ikakhulukazi uma kunemihlangano yawo wonke. Ubuholi bakhe, ubuntu nokumela iqiniso uma ethatha izinqumo yinto ezokhumbuleka kakhulu ngaye,” kusho uNcalane esitatimendeni soMkhandlu.
Mayelana nokuthi ngubani ozovala isikhala sikaMthenjana, eMkhandlwini uNcalane uthe: “UMkhandlu ubungakahlali ukuthi udingide udaba lokubekwa kukaSomlomo omusha. Lolu daba lusezandleni zoMnyango ezingeni lesifundazwe okuyiwo olusingethe. Amaqembu akhona kulo Mkhandlu yiwo athumela uhlu lwamagama abantu abaphakamisayo ukuthi bahlungelwe ukungena kulesi sikhundla. Okwamanje uMnyango ubungakasho lutho sizolinda wona kube yiwo ositshelayo ngokuzokwenzeka. Kungenzeka kube ngasekupheleni kwenyanga akukaqinisekiswa,sizolinda.”
UMphathiswa woMnyango Wezokubusa Ngokubambisana Nezindaba Zomdabu KwaZulu-Natal uNkk uNomusa MaDube Ncube wakhalisana kakhulu nomndeni noMkhandlu ngesikhathi kuzwakala izindaba zokudlula kukaMthenjana.